गतिलो मान्छे चारपटक प्रधानमन्त्री हुदैन्नन : ओली - Updates Nepal
गतिलो मान्छे चारपटक प्रधानमन्त्री हुदैन्नन : ओली
By pr3m	 Last updated Jan 26, 2018
२०७४ असोज ५ बिहीबार
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस–माओवादी सतिदेवीको अगं खसेजस्तै गरी सड्दै गएको आरोप लगाएका छन् । नवलपरासीको गैडाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सतिदेवीको अंग प्रत्यगं फतक्क–फतक्क खसेजस्तै अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी पुगेको बताए ।
दुवै पार्टीकोे जीवन तत्व नै छैन ।’ उनले भने, ‘जीवन तत्व नभएकोले सड्छ र अंग प्रत्यंग झर्छ । उनले भने,‘हाम्रो गाँउमा एउटा साढे थियो। बैसमा सबैलाई त्यसले जित्यो त्यसलाई बुढेसकालमा बाच्छोले पनि हेप्थ्यो । आज कांग्रेस त्यस्तै हालतमा छ । उसले फु गर्न खोज्छ बाच्छोले हान्दिन्छ। कांग्रेसले लोकतन्त्रको नाउँ दिएर माओवादीकी छोरी बोक्ने काम गरेको उनले बताए ।
‘यही परिपाटी कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई माओवादीले छोरी बोकाएको छ । डोको बोक्याछ नाम्लो लगाएको छ । के बोक्यो कांग्रेसले भनेको त माओवादीको छोरी ?’उनले भने,‘प्रजातन्त्र केलाई आयो भन्दा त माओवादीको छोरीलाई आयो । पिपलको बोट र तिते पातीसँग तुलना गर्दै ओलीले पिपलको बिरुवाभन्दा तिते पातीको बिरुवा छिटो हुर्किने तर छिट्टै बुढो भएर ढल्ने बताए । माओवादी पनि तिने पाती जस्तै भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँग जस्तो पनि सम्झौता गरेको उनले आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्री चारपल्ट किन हुनुर्पयो? गतिलो मान्छे चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदैन । एकपल्टमा काम देखाउँछ’ उनले भने । मतपत्र च्यातेको बेठिकसम्म पनि भन्न नसकेको उनले बताए । ‘मैले देउवालाई सोधे किन मत पत्र च्यातेको थाहा पाउनुभएन?मैले थाहा पाएको छैन भन्नुहुन्छ । यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ ।’ उनले भने,‘अदालत समेत निरिह भएको छ ।अदालतलाई दुर्गाभवानीले रक्षा गरुन्। अदालत मर्या्दित र निष्पक्ष हुनुपर्नै भन्दै ओलीले मतपत्र च्यातेको र प्रहरीमाथि भएको अन्याय ठिक नभन्न आग्रह गरे । अहिले अदालत उहिलेको पञ्च भलादमी जस्तो भएको उनले बताए ।
कांग्रेसको प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा चुनावी घोषणापत्र
दुई जना मारिए, पेरूमा ठुलो भूकम्प पछि १७ लापता
के तपाई आइफोन चलाउनुहुन्छ ? । एप्पल को सबै प्रडक्टमा सुरक्षा खतरा !
शाख्टार विजयी, युक्रेनी क्लब
बच्याे म्यान्चेष्टर युनाइटेड डि गियाको उत्कृष्ट गोल किपिङले
यी खानेकुरा फ्रिजमा राखेमा बिष सरह बन्छन